Yonke into malunga neMibala yePallete, umbala oSwelayo, umbala wokupeyinta, umbala weenwele kunye nombala we Makeup | Online Image Color Picker
Yonke into malunga neMibala yePallete, umbala oSwelayo, umbala wokupeyinta, umbala weenwele kunye nombala we Makeup
Xa kuziwa kumbala, into yokuqala eza engqondweni yakho isenokuba luluhlu lwemibala oyaziyo. Zingabomvu, ziblowu, ziluhlaza, zimnyama, zimhlophe, zimdaka ngombala, zingwevu, zipinki, zimfusa, kunye nezinye. Ngoku, kuya kufuneka wazi ukuba kukho ngaphezulu kwe-16.8 yezigidi zemibala.
Uyabona, imibala ayinakuhlukaniswa nobomi bomntu. Ungayithethi, kufuneka uqhelane nepende yombala. Okanye, mhlawumbi, kuya kufuneka ufake umbala weswatch okanye umbala wokupeyinta kubugcisa bakho. Kwaye, awukwazi ukukuphepha ukusebenzisa umbala weenwele ezintsha okanye umbala wombala ukwenza inkangeleko entle. Uyabona, umbala luphawu lokubonwa komntu okuchazwe kwiindidi zemibala.
Yintoni umbala uPalette?
Into yokuqala yokuqala, kufuneka uyazi ukuba iphalethi yombala lelinye igama lesikimu semibala. Uyabona, kumbono wemibala, isikimu semibala kukhetho lwemibala esetyenzisiweyo kuyilo lodidi lweendaba. Ungayichazanga, ukusetyenziswa kwemvelaphi emhlophe ngombhalo omnyama. Ngumzekelo wesikimu semibala esisiseko nesingagqibekanga kuyilo lwewebhu. Okungakumbi ukutsho, izikimu zombala zisetyenziselwa ukudala isitayile kunye nokubhenela.
Izinto ezisisiseko zethiyori yombala kunye nesigama umbala
Ngaba umbala unantoni, njengeblue okanye ebomvu
Umbala ucocekile kangakanani; ukungabikho mhlophe, mnyama okanye grey kongezwa kuyo
Ukomelela okanye buthathaka kombala
Umbala ukhanya okanye umnyama kangakanani
Yenziwe ngokongeza i-grey kwi-hue emsulwa
Yenziwe ngokongeza umnyama kwi-hue emsulwa
Yenziwe ngokongeza mhlophe ku-hue
Zeziphi iipleyiti zemibala eyahlukeneyo?
Ngolwazi, kukho iintlobo ezine eziphambili zeephalethi zemibala. Nako sisiya!
Ewe, kubonisa izithunzi ezahlukeneyo kunye nobunzulu be-hue enye. Uyabona, inokuba zezona zicwangciso zemibala zilula ukuyila. Kungenxa yokuba zonke zithathwe kumbala omnye. Ewe kunjalo, kunokuba nzima kodwa akunakwenzeka ukwenza isikeyiti okanye isikimu esibi. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke. Yiyo i! Iipletto ze-Monochromatic zinokubangela ukuba kube lula xa zithe zenziwa kakubi.
Okulandelayo, lubonisa umbala ophambili kunye nemibala evela kwicala elinye kwivili lemibala. Ngakumbi ukwazi, iipletthe zenza umsebenzi omuhle wokubonisa ukungaguquguquki. Kwangelo xesha, kusebenza ukufana ngaphakathi koyilo. Ewe, kulula ukusebenza nabo njengoko kungekho mahluko mkhulu kwi-hue. Endaweni yoko, ungabona ukuba umahluko ubonwe ikakhulu ngumahluko kumbala wombala. Kwaye, kunciphisa nakuphi na ukuphazamiseka kude nomxholo.
Okulandelayo, kuyakudityaniswa okanye imibala echaseneyo evela kwibala lemibala. Ifana nebomvu kwaye iluhlaza, iblowu kunye neorenji, njalo njalo. Ngokuqinisekileyo, iipletlet ezihambisanayo zilungile ngombono wokulinganisela. Ungayichazanga, unokujonga i-palette ze-analog. Apha, ungongeza iithayile ezahlukeneyo kunye nezithunzi ezinokwandisa izikimu. Le iya kuba luncedo ekuthinteleni ukungangqinelani okukhoyo. Ke, unokuthintela ukudala i-eyestrain kanye xa imibala emibini echaseneyo ibekwe ecaleni komnye.
Okokugqibela, ibonisa imibala emithathu ukusuka kumanqaku alinganayo kwisondo lemibala. Zifana nokubomvu, tyheli, kunye nohlaza okwesibhakabhaka. Ungabona ukuba indlela yoxantathu idala iphalethi eyahlukileyo. Ngesi sizathu, kuthatha ukucwangciswa kunye nokuvavanywa kancinane. Ngaphandle kwamathandabuzo, kunjalo njengoko kubandakanya inani elikhulu leempahla ezichaseneyo.
Ngaba uyazi ukuba ichaza ntoni imibala?
Luhlaza: ukuzithemba, ukuzola, ubukrelekrele
I-Orenji: ulonwabo, intshiseko, ubuchule
Mnyama: ubuhle, amandla, imfihlakalo
Bomvu: amandla, amandla, inkanuko
Imhlophe: ukucoceka, ukucoceka, ukugqibelela
Ephuzi: ingqondo, ulonwabo, amandla
Luhlaza: ukukhula, ukutsha, amabhongo, ukhuseleko
Injongo: amabhongo, ubunewunewu, ubugcisa bokudala
Ndiyifumana njani iphareji yam yombala?
Kuya kufuneka ukhethe i-undertones yakho. Ukuchonga ixesha lakho lemibala, okokuqala kufuneka uqonde ukuba ngaba iimpawu zakho zifudumele okanye zipholile phantsi kwetontones.
Misela umahluko omkhulu okanye umahluko ophantsi
Ukuchonga ixesha lombala wakho
Jonga ipharethi yakho yombala!
Yintoni umbala weSwatch?
Ewe, iswatch sisampulu yezinto ezibonakalayo okanye umbala. Umzekelo we swatch sisiqwengana esincinci.
Nguwuphi umbala wokupeyinta ekufuneka ndipeyinti kwigumbi lam lokuhlala?
Uyazi, kukho imibala emi-5 ephezulu onokuyifaka kwigumbi lakho lokuhlala. Nako sisiya!
Ewe, luhlaza ngombala wokuvumelana kunye nokuvuselelwa.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iindonga ezingwevu zenza ukuba igumbi lakho lokuhlala lizive libanzi ngakumbi.
Ewe, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngumbala owuthandayo, ngoko ke akukho buchopho kwigumbi elidibanisa wonke umntu.
Kwaye, i-beige kukuhamba-nokungathathi hlangothi kubaqulunqi bengaphakathi.
Le, umbala omnyama uyakwazi ukubonisa ubuhle begumbi lakho.
Ngoku, Ungathini Ngokusebenzisa Umbala Weenwele Zomntu?
Apha, kuya kufuneka wazi ukuba umbala weenwele ngumbala weenwele ezijolise kwiintlobo ezimbini ze-melanin. Owokuqala yi-eumelanin kwaye owesibini yi-pheomelanin. Ngokubanzi, ukuba ngaphezulu kwe-eumelanin ikhona, uya kufumana umbala weenwele umnyama. Kwaye, ukuba i-eumelanin encinci ikhoyo, uyakufumana i-h